Surface Book3နဲ့ Surface Go2မိတ်ဆက်လိုက်တဲ့ Microsoft
Surface Book3& Surface Go 2? Windows Laptop တွေ ဘယ်လိုပဲ ကောင်းတယ်ပြောပြော Top-notch Feature တွေနဲ့ Premium အဆန်ဆုံး ထုတ်ပြပါဆိုရင် Surface! Surface လို့ပဲ ပြောရမှာပါ။
မိုက်ခရိုဆော့ဖ် အနေနဲ့ Hardware လုပ်ငန်းပိုင်းကို ASUS ၊ Razer ၊ MSI ၊ Gigabyte အစရှိတဲ့ OEM ကြီးတွေဆီ လွဲပေးထားပေမယ့် အထင်ကရ ထုတ်ကုန်ဆိုရင် Surface တွေလို့ပဲ ပြောရမှာပါ။
ဒီလို Windows Laptop တွေရဲ့ ထိပ်ဆုံးမှာ သီးသန့်နေရာယူထားတဲ့ Surface ပစ္စည်းတွေကလည်း အမျိုးစား စုံလင်ပါတယ်။ ရှေ့စာလုံး Suffix က မျိုးနွယ် (Family Name) ကို ရည်ညွန်းသလို နောက်မှာ တွဲပါလာတတ်တဲ့ Pro ၊ Go တို့ဆိုတာတွေက မော်ဒယ် နာမည်တွေပါ။
စာဖတ်သူတွေ အနေနဲ့ သိစေချင်တာက Surface Line-up မှာ Surface Pro ၊ Surface Go ၊ Surface Laptop နဲ့ Surface Book ဆိုပြီး မော်ဒယ် ၄ မျိုးရှိတာပါ။
Pro စီးရီးနဲ့ Go တို့က ဖွဲ့နွဲ့ပုံချင်း အတူတူဖြစ်သလို ဖြုတ်နိုင်၊ တပ်နိုင်တဲ့ Trackpad နဲ့ Keyboard တို့ ပါဝင်တယ်၊ Laptop လို့ နာမည်ခံထားသူက ကျွန်တော်တို့ မြင်ဖူးနေကျ သမားရိုးကျ Ultrabook တွေလိုပါပဲ။ Book မှာကျ ညီအကို ၃ ယောက်နဲ့မတူ ဖြုတ်နိုင်၊ တပ်နိုင်တဲ့ Display ပါဝင်ပြီး သူ့တစ်ခုထဲနဲ့ Tablet အသွင် သုံးနိုင်တာပါ။
ဒီ ရက်သတ္တပတ်အတွင်းမှာလည်း Razer Blade Stealth ၊ MacBook Pro 13 ၊ Samsung Galaxy Book Flex/Ion တို့ ရှေ့ဆင့်၊ နောက်ဆင့် မိတ်ဆက်ခဲ့သလို နွေဦးရာသီ ဖြစ်တဲ့အတွက် ASUS ၊ MSI တို့ရဲ့ Gaming Laptop အသစ်တွေက စောင့်ကြိုနေပါတယ်။
စာဖတ်သူတွေ အနေနဲ့လည်း ကိုယ်နဲ့အံကိုက်ဖြစ်မယ့် Laptop က ဘာမျိုးဖြစ်မလဲ? ဒီဆောင်းပါးလေးမှာတော့ Surface Book3နဲ့ Surface Go2အကြောင်း ပြောသွားပါမယ်။
Microsoft ရဲ့ အကောင်းဆုံးနဲ့ စွမ်းဆောင်ရည် အမိုက်ဆုံး မော်ဒယ်လို့ ပြောနိုင်သလို Laptop နဲ့ Tablet မျိုးစပ်ထားတဲ့ Hybrid ဖြစ်နေတာကြောင့် Surface Book ကို နှစ်ခြိုက်ကျပါတယ်။
Display ကိုယ်ထည်မှာ Battery ၊ CPU ၊ RAM အစရှိတဲ့ Component တွေပါဝင်ပြီး Keyboard ကိုယ်ထည်မှာတော့ External Battery နဲ့ GPU တို့ပါဝင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် သုံးစွဲသူတွေ အနေနဲ့ Keyboard ကိုဖြုတ်ပြီး Display တစ်ခုထဲ Tablet အနေနဲ့ သုံးနိုင်သလို Flip လုပ်ပြီး ထောင်လိုက်ဖြစ်စေ Surface Book ကို လိုသလို သုံးလို့ရတာက အားသာချက် ဖြစ်နေတာပါ။
ဒီတော့ Display ပိုင်းက အသက်သွေးကြောလို ဖြစ်နေတဲ့ Book Line-up မှာ 13.5” နဲ့ 15” ဆိုပြီး အရွယ်စား ၂ မျိုးနဲ့ ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။ ရွေးချယ်လိုက်တဲ့ Size အလိုက် 13.5” မှာ 3000 x 2000 Resolution နဲ့ 15” မှာ 3240 x 2160 Resolution ဆိုပြီး PixelSense Touch Display တပ်ဆင်ပေးထားမှာပါ။
ဒါကြောင့် Windows Laptop တွေနဲ့ ယှဥ်ကြည့်ရင် သုံးစွဲရတဲ့ Experience ပိုင်း ပိုပြည့်စုံသလို 267 နဲ့ 260 ppi အသီးသီးရှိ Ultra HD Screen တွေက နူးညံ့ချောမွေ့ပြီး အနုစိပ်လှပတဲ့ Display ပေးစွမ်းဦးမှာပါ။ တခြား Brands တွေမှာရော မရှိဘူးလားဆို ရှိပါတယ်။
Surface Book ကို မမီသေးတာ အမှန်ပါလို့ ပြောရမှာပါ။ 1600:1 Contrast Ratio ဆိုတာက Laptop တစ်လုံးအတွက် လိုတာထက် ပိုနေသလို အလင်းအား (nits) လုံလောက်စွာ ထောက်ပံ့နိုင်ပါတယ်။
10th Intel & Turing Graphics
အခုလို Display Quality ပိုင်းမှာ အားရစေသလို Book3Series အတွက် ရွေးချယ်နိုင်တဲ့ Processor ၊ GPU တွေကလည်း စွမ်းအင် ပြည့်နှင့်ပြီးသားပါ။ တချို့သူတွေ ဘာလို့ Ryzen ကို မရွေးလည်း တွေးချင်ကောင်း တွေးမိနိုင်ပေမယ့် Intel ပဲ Choice ရှိပါသေးတယ်။
Apple အနေနဲ့လည်း MBP 13 မှာ Ice Lake Processor နဲ့ပဲ Offer ပေးထားလို့ ရိုင်ဇန်းတွေ ဘယ်လိုပဲ စွမ်းဆောင်ရည် ကောင်းတယ်ပြောပြော Intel လောက် Market Share မများ၊ မကောင်းတာ သိသာနေပါတယ်။
ခု 13.5” မှာ Core i5-1035G7 နဲ့ Core i7-1065G7 နှစ်မျိုး ရွေးနိုင်သလို ဒီ Processor တွေက 25W Advantage သုံးစွဲနိုင်မယ်လို့ ယူဆရပါတယ်။ 15” ကတော့ i7-1065G7 တမျိုးတည်းပဲ Choice လို့ရသလို ပါဝင်လာမယ့် Graphics Option ကတော့ ကွဲပြားပါတယ်။
i5 အလုံးမှာ Onboard GPU ဖြစ်တဲ့ Iris Plus Graphics ပဲ သုံးစွဲနိုင်မှာဖြစ်ပြီး 13.5” မော်ဒယ်မှာ ရွေးချယ်နိုင်တဲ့ i7 အတွဲအတွက် GTX 1650 Max-Q ထည့်ပေးထားမှာပါ။
4GB Video RAM ပါဝင်မှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် 13.5” က Razer Counterpart ဖြစ်နေသလို GTX 1650 အသုံးပြုထားတဲ့ Gaming ၊ Ultrabook တွေအစား စဥ်းစားစရာ မော်ဒယ်တောင် သွားဖြစ်နေပါတယ်။
15” ကတော့ အရွယ်စား ပိုကြီးသလို Cooling နိုင်တဲ့အတွက် GTX 1660 Ti အထိ ထောက်ပံ့ထားပါတယ်။ တကယ်လို့ Creator Only သုံးချင်တယ်ဆိုရင် Quadro 3000 Series Graphics နဲ့ ရွေးချယ်နိုင်ပါသေးတယ်။
Microsoft အဆိုရ 13.5” ဟာ ၁၅ နာရီခွဲ အသုံးခံမယ်လို့ ဆိုထားသလို အရွယ်စားပိုကြီးတဲ့ မော်ဒယ်က ၁၇ နာရီခွဲ အသုံးပြုနိုင်မယ်လို့ ပြောထားပါတယ်။ ဒီအခြေနေက Typical Use Conditions လို့ သုံးနှုန်းထားတဲ့အတွက် Daily Use အတွက် အားခံမယ်လို့ ဆိုလိုတာပါ။
Book3ကိုပဲ သပ်ရပ်လှပအောင် ထုတ်ထားတာ မဟုတ်သလို သုံးစွဲသူတွေကို ဘဝင်ကျစေမယ့် အချက်က CPU နဲ့ GPU ပါဝါစားနှုန်းအလိုက် အံကိုက်ဖြစ်အောင် ထုတ်ထားတဲ့ Charger တွေပါ။
သိတဲ့အတိုင်း Weigh အလေးဆုံးက ဘက်ထရီနဲ့ Charger ဖြစ်သလို i5 အလုံးဆိုရင် 65W Charger နဲ့ တွဲပေးထားတယ်၊ i7 + GTX 1650 Max-Q နှစ်ဖော်အတွက် 102W Charger နဲ့ 15” ကိုတော့ တသမတ်ထဲ 127W Charger နဲ့ အသုံးပြုစေမှာပါ။
တကယ့်ကို အနုစိပ်ပြီး တိကျတယ်လို့ ဆိုနိုင်သလို အလဟပ်သပ် လေလွင့်တာမျိုး မရှိရအောင် Minimalist ဒီဇိုင်းနဲ့ ထုတ်ထားတာ ကျေနပ်စရာပါ။
i7-1065G7 က အများဆုံး 25W သုံးစွဲပြီး GTX 1660 Ti (Max-P) ကတ်က 80W စားရင် Combine Load က 105W ကျန်တဲ့ Component တွေက 22W သေချာ Analysis လုပ်ပြီး ထုတ်ထားတာက အပို၊ အလိုမရှိ ဆရာကျလွန်းတယ် ပြောရဦးမှာပါ။
Windows Hello with extra Security
မပါမဖြစ် ပါရမယ့် Hello Features အတွက် IR Camera သုံးပေးထားသလို ပူးတွဲလုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ TPM 2.0 Security Chip ကို Surface Book3ထဲမှာ မြုပ်နှံထားပါတယ်။
နောက်တစ်ချက်က Windows Laptop အားလုံးထဲမှာ အားရစရာ 1080p Video Call ခေါ်ဆိုနိုင်မယ့် 5MP Front-facing Camera ၊ Autofocus ပါဝင်တဲ့ 8MP Rear Camera တပ်ဆင်ထားတာပါ။
Microsoft အဆိုရ Speakers နဲ့ Mic အရည်သွေး ပိုကောင်းလာသလို Dual Far-field Studio Mics အသုံးပြုထားတဲ့အတွက် ခပ်လှမ်းလှမ်း အကွာဝေးက ပြောရင်တောင် အသံ Quality ပိုကောင်းစေမှာပါ။
Speaker ပိုင်းအတွက် Dolby Atmos နဲ့ အားဖြည့်ထားသလို Front-facing Speaker ၂ လုံး တပ်ဆင်ထားပါတယ်။
Surface Book တွေမှာ သုံးထားတဲ့ Keyboard ကို လိုတာထက် ပိုနေတဲ့ Keyboard လို့ပဲ ပြောရမှာပါ။ Dedicated GPU နဲ့ Battery အပိုသယ်ထားတဲ့အပြင် 1.5mm Full-size Backlight ဖြစ်တာကြောင့် Magic Key သုံးထားတဲ့ MacBook တွေထက် သာနေပါသေးတယ်။
Trackpad ကလည်း Fingerprint Coating အုပ်ထားတဲ့အပြင် Multi-finger Gesture ထောက်ပံ့ထားတဲ့ Glass Trackpad ဖြစ်တာကြောင့် သုံးစွဲရတဲ့ အပိုင်းမှာ ပြည့်စုံတယ်လို့ ခံစားရစေမှာပါ။
Pricing & Colour
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ပြောရမှာက ရောင်းချမယ့် စျေးနှုန်းဖြစ်ပြီး ခုလို Luxury Product တစ်ခုကို Premium Price ပေးရမှာ စာဖတ်သူတွေ နားလည်မယ် ထင်ပါတယ်။ Surface Book3ကို $1,599 ကနေ ဝယ်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပြီး တမျိုးတည်းသော Silver ငွေရောင်ကာလာနဲ့ပဲ ရွေးချယ်နိုင်မှာပါ။
$,1599 for i5-1065G7 ၊ $2,299 for i7-1065G7 ၊ $3,499 for GTX 1660 ti or Quadro RTX 3000 GPU
ခုလို စျေးကြီးနေလို့ လိုတော့လိုချင်ပါရဲ့ မစဥ်းစားနိုင်ဘူး တွေးမိရင် Microsoft Offer ပေးထားတဲ့ Surface Go ရှိပါသေးတယ်။ ဒီမော်ဒယ်က စျေးအသက်သာဆုံး ဖြစ်သလို ရုံးသုံး ၊ ကျောင်းသုံးနဲ့ Content Writer သမားတွေအတွက် သင့်တော်တဲ့ Surface ဖြစ်နေလို့ပါ။
ဒီမော်ဒယ်ကို ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခဲ့တာ ၂၀၁၈ ဇူလိုင်တုန်းကဖြစ်ပြီး Consumer အတွက် အသက်သာဆုံးစျေး ၊ အလုံလောက်ဆုံးသော Features တွေနဲ့ စွမ်းဆောင်ရည် ထွေးပိုက်ထားတဲ့ ထုတ်ကုန်တမျိုးပါ။ ၂၀၂၀ မော်ဒယ်မှာတော့ လက်မဝက် (10.5”) ပိုကြီးလာပြီး 1080p Resolution သုံးထားပါတယ်။
Microsoft အဆိုရ ပိုသေးတဲ့ Bezels တွေ အသုံးပြုထားလို့ အခု 0.5” ပိုကြီးလာအောင် စီမံနိုင်တာဖြစ်ပြီး GO စီးရီးမှာ အားရစရာ အချက်က Active Pen Support ပါဝင်တာပါ။
နောက်တစ်ချက်က Tablet တစ်လုံး ဖြစ်လင့်ကစား နောက်ကနေ ထောက်ပံ့ထားမယ့် Kickstand ပါဝင်တဲ့အတွက် Keyboard နဲ့တွဲသုံးမယ်ဆိုရင်Laptop တစ်လုံးလို အသုံးပြုနိုင်မှာပါ။ Tablet ချည်းသီးသန့်ဆိုရင်တော့ ရုပ်ရှင်ကြည့်တဲ့အခါမျိုးမှာ သင့်တော်တဲ့ အနေထား ပံ့ပိုးနိုင်မှာပါ။
Microsoft အနေနဲ့ Surface Type Covers ရောင်းချနေပြီး Go နဲ့ တွဲဖက်အသုံးပြုဖို့ Keyboard နဲ့ Glass Trackpad ပါဝင်မှာပါ။
Original အလုံးမှာတုန်းက Pentium Gold တမျိုးထဲနဲ့ပဲ ကြေညာခဲ့ပေမယ့် Go2မှာတော့ Pentium Gold 4425Y အပြင် Core m3 8th Gen Processor ၂ မျိုး ရွေးခွင့် ပေးထားပါပြီ။ ဒီ CPU နှစ်မျိုးလုံးက Intel HD 615 Integrated Graphics ကိုပဲ Sharing လုပ်ထားတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် စကားချီထားသလို လုပ်ငန်းသုံးအတွက် သင့်တော်တာပါ။
Storage အနေနဲ့က ကန့်သတ်ချက်တွေ ရှိနေပြီး 4GB သို့မဟုတ် 8GB RAM ၊ 64GB eMMC ဒါမှမဟုတ် 128GB SSD တို့ပဲ ရွေးချယ်လို့ ရမှာပါ။ ဒီတော့ Data သိမ်းဖို့ လုံလောက်တဲ့ အနေထား မရှိတာမလို့ ထပ်တိုးချင်တယ်ဆိုရင် Micro SD ကနေ 1TB Storage အထိ ချဲ့နိုင်ပြီး သုံးနိုင်ပါတယ်။
ကွန်ရက် ချိတ်ဆက်မှုအတွက် Book3လို Wi-Fi6မပါဝင်ပေမယ့် Qualcomm X16 LTE Modem ပါဝင်ထားပါတယ်။ ဒါကြောင့် Bluetooth 5.0 နဲ့ LTE-A ချိတ်ဆက်မှုတွေ အသုံးပြုနိုင်မှာပါ။
Surface Go2မှာ ဘက်ထရီပိုင်း အဆင့်မြင့်တင်ထားခြင်း မရှိတဲ့အတွက် နဂိုအလုံးအတိုင်း ၁၀ နာရီဝန်းကျင် ထောက်ပံ့မယ်လို့ ယူဆရပါတယ်။ ဒီပမာဏကလည်း Hardware တွေနဲ့ ယှဥ်ကြည့်ရင် မဆိုးပေဘူး။
Security ပိုင်းကိုတော့ လစ်ဟင်းမှု မရှိစေရအောင် IR Camera ထည့်ပေးထားပြီး Windows Hello သုံးနိုင်မယ်။ Book3လို 1080p Video Call ခေါ်ဆိုနိုင်မယ့် 5MP Front Camera နဲ့ Autofocus ပါဝင်တဲ့ 8MP Rear Camera သုံးစွဲပေးထားပါတယ်။
အလားတူ Audio ပိုင်းမှာလည်း Weigh လျှော့ထားခြင်း မရှိသလို Dual Far-field Mic နဲ့ Stereo Speaker ကိုမှ Dolby Atmos နဲ့ အားဖြည့်ပေးထားပါတယ်။
တစ်ခုပဲ Go တုန်းကလို Windows 10 S ကို Default အနေနဲ့ အသုံးပြုထားမှာဖြစ်ပြီး S အဓိပ္ပာယ်က Microsoft Store ရဲ့ သီးသန့် Apps တွေနဲ့ Browser ကိုတောင် Edge တမျိုးပဲ သုံးစွဲခွင့်၊ သွင်းခွင့်ပြုထားတာကို ဆိုလိုတာပါ။
အကယ်လို့ ဝယ်ယူပြီး Windows 10 S မသုံးချင်ရင် Home သို့ Pro ကို ခဏအတွင်း အဆင့်မြင့်တင်နိုင်ပါတယ်။
ရောင်းချမယ့် စျေးနှုန်းက Pentium Gold အတွက် $399 ပါ။ Core m3 အလုံးက $629 ကျသင့်မှာဖြစ်ပြီးMicrosoft ထုတ်ကုန်သစ်တွေကို မေလ ၁၂ ရက်မှာ စတင်ဝယ်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပြီး စျေးနှုန်းသင့် Go2ကိုလည်း ငွေရောင်တမျိုးထဲနဲ့ ရွေးချယ်နိုင်မှာပါ။
တွဲရက် အသုံးပြုနိုင်တဲ့ Type Covers က $99 ကျသင့်မှာဖြစ်ပြီး Platinum ၊ Black ၊ Poppy Red နဲ့ Ice Blue ဆိုပြီး စုံလင်စွာ ထုတ်ပေးထားပါတယ်။
ကယ် ဆောင်းပါးလေး ဖတ်ရှုရင်း Surface ကို စိတ်ဝင်စားနေပြီလား? ကိုယ်နဲ့အံကိုက်ဖြစ်မှ စဥ်းစားပါ၊ ကျွန်တော်တို့ဆီမှာလည်း Microsoft ထုတ်ကုန်တွေ Service ပေးနေတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဝယ်မယ်ဆိုရင် အားပေးပါတယ်။
Source: Surface Book3(US) ၊ Surface Go2၊ XDA Developers